Barattoota yunivarsiitii Maaster Pilaannii FFN morman irratti murtiin hidhaa woggaa dheeraa darbe - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Barattoota yunivarsiitii Maaster Pilaannii FFN morman irratti murtiin hidhaa woggaa dheeraa darbe
Barattoota yunivarsiitii Maaster Pilaannii FFN morman irratti murtiin hidhaa woggaa dheeraa darbe
Oromoo ajjeesuun, hidhuu fi doorsisuun cimee itti fufee jira
Manni murtii Woyyaanee dhaddacha guyyaa har’aa taa’een barattoota Yunivarsiitii bara 2014 Maaster Pilaani Finfinnee morman jedhamanii qabamanii hidhan irratti murtee cimaa dabarse. Maaster Pilaannii mormaniif qofa barattoota Oromoo hidhaa yeroo dheeraatiin adabuun kan ifatti agarsiisu jibbaa fi tuffii sirni Woyyaanee Oromoo irraa qabuudha jedhu taajjabdoonni.
Akka mana murtii Woyyaanee kanatti barataa Addunyaa Keessoo fi Bilisummaa Daammanaa adabbii hidhaa woggaa afurii fi baatii shaniiti kan irratti murtaaye. Akkasumas, barataa Tashaalee Baqqalaa adabbbii hidhaa woggaa tokkoo fi baatii lamaan akka hidhamu itti murtaayee jira. Adabbiin Tashaalee Baqqalaa irratti dabre waan hanga amma inni hidhmee gadiidha. Kana jechuun Tashaalee Baqqalaa, adabbii isaa murtee mana murtii dura xumurate waan ta’eef, guyyaa muraasa keessati mana hidhaatii ni baya jechuudha. Kuni kan ta’u, garuu, yoo humni tika Woyyaanee murtii mana murtii kan dhagayuu fi kabaju ta’e qofa.
Barataa Abbabaa Urgeessaa, Shawaa Roobititti hidhamee ture, poolisiin mana hidhaa gara mana murtiitti osoo hin fidin hafaniiru. Sababni isaa maal akka ta’e hin beekamu. Garuu rakkoo fayyaa qabaatuu mala sodaan jedhu jira. Barataa Magarasaa Worquu yeroo dheeraadhaaf mana hidhaatti dararamaa fi itti taphatama erga turee boda badii tokko akka hin qabne itti himamee mana hidhaati gadi lakkifamuun isaa beekameera.
Sa’aa kanatti baratoonni, hoogganoonni jaarmaya siyaasaa, daldaltoonni fi qotee-bultoonni Oromoo kuma heddutti lakkawaman Master Pilaanii fi duguuggii sanyii Woyyaaneen Oromoo irraan geettu mormuu isaaniitiif qofa qabamanii manniin hidhaa fi mooraa woraanaa addaddaa keessatti dararaa sadarkaa addaddaa argaa jiru. Lammiileen keenna daandii fi mana isaniitii guuramanii manniin hidhaa keessatti doorsisamaa kan jiran kumaatama. Woyyaaneen namoota hidhaman irratti ragaa sobaan murtii hidhaa irratti dabarsiti. Yeroo tokko tokko ammoo yeroo dheeraadhaaf hiitee erga rakkistee fi fundura isaanii dukkaneesitee booda bilisa jedhaa gadi lakkisti. Oromoota saba isaaniif jecha hidhamnii dararamaa jiran gadi lakkisiisuu fi erga gadi lakkifamaniis barnootaa fi jireenyatti akka debi’an haala mijeessuun dirqama Ooromoo hundaati. Tokkoo tokkoo Oromoo lammii isaaf birmachuu irratti dirqamni gurguddaan akka irra jiru dagatamuu hin qabu.
barattoota yunivarsiitii hidhamn
maaster pilaanii finfinnee
mana murtii woyyaanee
Previous articleSeektariin turizimii jeeqamuun isaa kasaaraa diinagdee dhaqqabsiisuu fi Woyyaanee sharafa biyya-alaa dhabsiisuun beekame
Next articleGammadaa Waariyoo ‘Down Down TPLF!’ Woyyaanee fi Saharaa miliqee Kaayiroo seene
Oromoo humneessuu fi Afaan Oromoo guddisuudha hawwiin koo! Namoonni hawwii koo qoodamtan, ammas odeeffannoo qabdan naqunnamaa. email [email protected]